Saameynta uu yeesho caruurta furiinka - Aflixi.com - Geeraaro Macaan, Amaan Dumar, Maqaalo, Sidee, Geeraar
Home/Maqaalo/Saameynta uu yeesho caruurta furiinka
October 11, 2020 431 Views
Furiinka wuxuu noqday dhibaato bulshada dhexdeeda mana ahan mid lagu deg dego hadii ay is furan ama ay kala tagaan labada lamaane waxaan shaki ku jirin in caruurta ay soo wajihi doonto daryeel la,aan iyo tarbiyo la,aan taasi oo sabab u ah kala taga labada lamaane.
Sidoo kale saameynta uu ku leeyahay caruurta kala taga labada lamaane waxaa ka mid in caruurta la isku qab qabsado oo qof waliba raba in uu asiga caruurta ka xaysto taasina waxay ka mid tahay saameynta ay ku yeeshaan caruurta kala taga.
Saameynta ay ku reebto caruurta kala taga labada waalid ama furiinka waxaa ka mid ah:
1.Wuxuu saameeyaa furiinka noloshada caruurta mid aqooneed mid nololeed sida caruurta in ay iska dhaafaan waxbarashada ama ayba ka kala go,do waxbarashooda sababtoo ah waxaa ku dhacay mashaakil nafsiyadeed waayo waxay waayeen qoys ama hooyo iyo aabo oo isku faraxsan oo wada nool waana sababta ay ugu dhacdo cuqdad iyo walaahow.
2.in ay ugu faafto bulshada dhexdeeda xumaan ah in la yiraahdo caruurtaan laba dooda waalid waa ay kala tageen islamarkaana ay isku arkaan caruurtaas in ay yihiin danbiiilayaal bulshada dhexdeeda taasina sabab u noqon karta in ay noqdaan caruurtii markoodii hore waxbaran jireen in ay noqdaan kuwa guri joogta noqda ayagoo markaas ka xishoonaaya in bulshada kusoo milmaan.
3.in ay waayaan caruuta xaqii ay ku lahaayeen labada waalid sida tarbiyadooda,cuntadooda,labiskooda iyo caafimaadkooda intaba sidaasi ay kusoo wajahdo cuduro iyo in ay waayaan wixii xaqa u lahaayeen oo dhanka waalidnimada ah.
4. in ay ku dhacdo caruurtaas cuduro waaweyn oo ugu horeyso xanuun nafsi ah ama cuqdad nafsi cudur kasta ayay u nugulyihiin caruurta waalidiintooda kala taga .
Furiinka waa midka uu alaah ugu carada badan yahay oo ilaahay raali kama ahan in labada is qaba in ay kala tagaan maba ugu sii jirto haii ay caruur isku dhaleen wixii alaah caradiisa keenaayo waxaa aad iyo aad u wanaagsan in laga fogaado ilaa xad wallow uu yahay furiinka laftiisa wado ilaahay baneeyay hadana waxaa la rabaa in laga dhigo xalka ugu danbeeyay uusan noqonin xalka ugu horeeyo.
Qoys burburay oo labadii lamaane kala tagay waxay ka dhigantahay bulsho burburtay hadii uu qoys burburay saamayntiisa waxaa soo gaarayso bulashada kale sababtoo caruur labadooda waalid kala tageen aysan helin daryeel ,tarbiyo iyo waxbarasho waxaa hubaal ah in ay dhibi doonaan bulshada qeybaheeda kala duwan.
Previous Cilaajka ama daawada Ramadaan
Next Qaabka ugu fudud ee aad ku noqon karto aan hadal badneen